Dood baarlamaanka ku dhexmartay Fredrik Reinfeldt iyo Mikael Damberg - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Mikael Damberg iyo Fredrik Reinfeldt.
Dood baarlamaanka ku dhexmartay Fredrik Reinfeldt iyo Mikael Damberg
Dood baarlamaanka ku dhexmartay raysalwasaaraha Reinfeldt iyo Damberg oo ah wakiilka xisbiga S
Publicerat torsdag 16 januari 2014 kl 14.13
Dooddii ugu horreysey oo sannadkaan dhexmarta hoggaamiyayaasha xisbiyada baarlamaanka ku jira ayaa maanta ka dhacday aqalka baarlamaanka, halkaas Mikael Damberg oo xisbiga Sooshiyaal-dimoqraadiga u hadlaya iyo Raysalwasaaraha Iswiidhen Fredrik Reinfeldt oo isla markaasna hoggaamiye u ah xisbiga Moderaatka. Reinfeldt ayaa furitaanka doodda ku bilaabay:
- Mudane guddoomiye, ololihii doorashadu waa bilowdey. Shaqada ayaana ah su’aasha ugu muhiimsan doorashadaan.
Kaasi wuxuu raysalwasaaraha Iswiidhen Fredrik Reinfeldt oo hadalkiisa ku sii daray in dowladdiisu shan qodob ay dadweynaha taageero u raadsan doonto:
- Shantaan qodob oo aan dhihi karo waa kuwo la dhaqangelin karo. Waa wax suurtagal ah in shaqooyin badan la abuuro. Waxaa lagu gaari karaa dhaqaale xooggan, waxsoosaarka aan dhammaanteen ka qaybqaadanno, dad badan oo shaqooyin hela iyo kuwo yar oo suuqa shaqada bannaanka ka jooga, iyo shirkadaha, maamulada degmooyinka iyo maamulada gobolada ka wada qaybqaata kobcinta dhaqaalaha. Sidaas ayaanna ku heli karnaa fursado ay Iswiidhen ugu hiigsato mustaqbalka.
Mikael Damberg oo ah guddoomiyaha xildhibaanada xisbiga Sooshiyaal-dimoqraadiga, isla markaas wakiil ka ah hoggaamiyaha xisbiga oo aan isagu baarlamaanka xubin ka ahayn, ayaa dooddiisa dhaleeceyn ugu soo jeediyey Reinfeldt iyo dowladdiisa aragtida gaaban oo ay ka haystaan dhaqaalaha dalka:
- Siddeed sano oo qura ayuu Fredrik Reinfeldt ku khasaariyey wixii laga dhaxlay Göran Persson, iyo dheeraadba. Faa’iidada dakhliga dowladda oo ahayd 65 bilyan oo karoon ayuu u beddelay in miisaaniyadda qaranku hoos ugu dhacdo 87 bilyan oo karoon. Waa xaalad halis ah.
Raysalwasaare Fredrik Reinfeldt ayaa dhaleeceyntaas gaashaanka ku dhuftay, isagoo sheegay in dowladdu ay dhaqaalaha si wanaagsan u maareysey. Wuxuu intaas ku daray in jawiga dhaqaale ee Iswiidhen u soo iftiimayaa uu ka wanaagsan yahay dalalka deriska ah.
- Su’aasha weyn oo aan u diraayo dadka la socda siyaasadaha Iswiidhen ayaa ah ma sheegi kartaan markii ugu dambeysey oo aad la kulanteen qof sooshiyaaldimoqraadi ah oo yiraahda ”hadda waa waqti wax la dhaqaaleyn lahaa. Hadda waxaa la galay waqtigii kharashyada hoos loo dhigi lahaa. Hadda waxaan aragnaa in aan qarka u saarannahay in aan dhammeynno hantidii bulshada”. Ma la kulanteen qof sooshiyaaldimoqraad ah oo sidaas qaba? Waa maya, oo wax walba ayey cid walba u ballanqaadaan.
Afhayeenka xisbiga Sooshiyaal-dimoqraadiga Mikael Damberg ayaa isagoo dooddiisa sii wata diirradda saaray shaqada iyo dugsiyada. Wuxuu sheegay in loo baahan yahay in la qaado waddo ka duwan tan dowladdu jeexday:
- Siddeed sano oo uu Reinfeldt raysalwasaaraha ka ahaa Iswiidhen waxay shaqa-la’aantu gaartay heer ka sarreeya heerkii ay joogtey markii uu talada la wareegay. Siddeeddii sano oo uu Anders Borg canshuurta dhimaayey waxay dhaqaalaha Iswiidhen gaarsiisey hoos u dhac weyn oo aan khatar ugu sugannahay in nala ku daro liiska dalalka dhaqaalaha xun ee Midowga Yurub. Siddeeddii sano oo uu Jan Björklund wadey siyaasaddii waxbarashada, waxay keentay in waxbarashadii dugsiyadu dhulka gasho.Waxaan u aragnaa siddeed sano oo naga lumay. Balse dhowaan waxaa la gelayaa xilligii uu dadweynaha Iswiidhen dooran lahaa waddo cusub.